Beesha Caalamka oo digniin culus ka soo saaray xaaladda Siyaasadeed ee dalka Soomaaliya | HalQaran.com
Home Warar Cusub Beesha Caalamka oo digniin culus ka soo saaray xaaladda Siyaasadeed ee dalka...
Beesha Caalamka oo digniin culus ka soo saaray xaaladda Siyaasadeed ee dalka Soomaaliya
Muqdisho (Halqaran.com) – Beesha caalamka ayaa war xasaasi ah ka soo saartay is bedelada siyaasadeed ee dalka ku soo kordhay, ka dib markii Xildhibaannada Golaha Shacabka ay Sabtidii kalsoonia kala laabteen Xukuumaddii Ra’iisal Wasaare Xasan Cali Khayre.
Saaxiibada caalamka ee Somaliya ayaa waxay warka ku muujiyeen walaacooda iyo rajo xumadooda ku aadan is bedeladaan cusub, ee ay hormuudka ka noqdeen Xildhibaanada Golaha Shacabka.
Warka ayaa sidoo kale lagu sheegay inaanay is bedeladaan cusub wiiqi doonin dadaalada ay tahay in lagu gaaro is afgarad siyaasadeed, oo la xiriirta doorashada oo waqtigii loogu talagalay ku qabsoomta, isla-markaana aysan horseedi karin is bedeladaan dib u dhac ku yimaada guulihii illaa iyo hadda laga gaaray Dowladnimada Somaliya.
Sidoo kale, waxaa warka lagu sheegay in beesha caalamka ay ku baaqeyso in arrimaha doorashooyinka ee dalka laga yeesho wadatashi loo dhan yahay, si dalka loogu hoggaamiyo doorasho heshiis lagu yahay.
“Wada-hawlgalayaashu waxay si joogto ah ugu baaqeen wadatashiyo loo wada dhan yahay, si loo gaaro heshiis sal ballaaran oo ku saabsan qaab dhismeedka doorashada 2020. Tani waa sababta ay u soo dhoweeyeen go’aanadii ay Madaxda Federaalka iyo Dowlad Goboleedyada ku gaareen Dhuusamareb, 22-kii bishan, oo tallaabo muhiim u ah yoolkaas.” Ayaa lagu yiri warka.
Warka ayaa lagu yiri “Saaxiibada caalamka ah waxay dhawrayaan in Madaxda Dowladda Federaalka iyo Dowlad Goboleedyaduba ay xushmeeyaan heshiiskii 22-kii July lagu gaaray Magaalada Dhuusamareb iyo waqtiga la qabanayo shirarka dabagalka, ee ay isugu imaanayaan Dowladda Federaalka, Dowladaha xubnaha ka ah, Guddoonka Baarlamaanka Federaalka, Xisbiyada Siyaasadda iyo Wakiilada Bulshada Rayidka.”
Beesha caalamka ayaa warka ku cadeysay inaanan la aqbali doonin doorasho uu hal dhinac oo qura garwadeen ka yahay, isla-markaana ay khasab tahay in taageero laga haysto daneeye-yaasha kale ee siyaasadda dalka.
“Isku-day kasta oo ay yeeshaan hal daneeye oo si keli keli ah loogu soo rogo qaababka doorashada wuxuu u dhimayaa sharci ahaanshaheeda lamana dhaqan-gelin doono, haddii aan laga helin taageerada lagama maarmaanka ah dhinacyada kale ee ay khusayso.” Ayaa lagu yiri warka.
Warka ayaa lagu xusay in beesha caalamka ay isha ku hayn doonto tallaabooyinka xigga ee horey loogu qaadi doono arrimaha doorashooyinka ee dalka. Taageerada caalamka waxay ku xirnaan doontaa sida warka lagu sheegay dhinacyada siyaasadda ee dalka oo isku aragti ka noqda arrimaha doorashooyinka.
“Wada-hawlgalayaasha ayaa si dhow ula socon doono horumarka horey u socda. Ka go’naanta arrimaha mudnaanta leh ee la isku raacay iyo xalinta khilaafaadyada, iyadoo loo marayo wadahadal iyo isku tanaasul, taasoo muhiim u ah sii wadista taageerada caalamiga ah ee Somaliya ee heerarka hadda jira.” Ayaa lagu yiri warka.
Ugu dambeen, Beesha caalamka ayaa Dowladda Federaalka iyo Dowlad Goboleedyadaba ugu baaqay inay si deg deg ahi ku soo magacaabaan guddiyadii loo qorsheeyay inay laba toddobaad ka dib wadahadalada uga qaybgalaan Magaalada Dhuusamareeb ee Xarunta Maamulka Galmudug.
Qoraalka ayaa waxaa soo saaray dhinacyada hoos ku qoran.
*Austria, Belgium, Boqortooyada Midowday ee Britain/Ingiriiska, Canada, Denmark, Dowladda Maraykanka, Faransiiska, Finland, Holand, Ireland, Japan, Jarmalka, Kenya, Midowga Yurub, Norway, Qatar, Spain, Sweden, Switzerland, Talyaaniga, Urur Goboleedka (IGAD), Ururka Iskaashiga Dalalka Islaamka, iyo Qaramada Midoobay.
Beesha Caalamka Digniin
Shirka Golaha Wasiirada Somaliya oo lagu ansixiyay Guddiga maamulka hay’adda Qaranka ee Naafadda
Wasiirka Amniga oo sheegay in la soo qabtay saraakiil iyo ciidamo ku lug lahaa dilkii Guddoomiyaha D/Hodan +(VIDEO)
Madaxweynaha Puntland oo beesha caalamka kala hadlay muranka Doorashooyinka dalka